Maninona no mifidy anay - Weifang Kailong Pump Industry Co ,. Ltd.
NAHOANA NY FANAOVANA INVESTASIASA?
Kailong Precision Foundry dia manolotra tombony be ho an'ny mpampiasa farany, mpamolavola na mpanamboatra azy, amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fizotran'ny fanary savoka hamokarana singa, izay matetika no noheverina hovolavolaina tamin'ny fomba lafo loatra na teritery loatra amin'ny resaka endrika singa. Ireny fanariana fampiasam-bola ireny dia manana toetra tsy manam-paharoa tsy tratran'ny fizotr'asa hafa, noho ny fampiasana ny endrika savoka atsindrona maty ho modely. Io dia ahafahantsika mahazo ny antsipirihany sy ny maha-marina ny singa vita amin'ny famolavolana tsindrona, izay natokana ho an'ny metaly ambany, nefa ny tena izy dia vita avy amin'ny metaly sy allozy avo lenta toy ny vy sy vy vy. Izany dia noho ny famolavolana akorany seramika tsy misy fangarony naorina manodidina ny endrika savoka. Ny akorandriam-bakoly dia mitazona ny endrik'ireny geometrika savoka ireny amin'ny hafanana avo indrindra raha ny metaly metaly kosa, narotsaka tao anaty akorandriaka, dia mivaingana ao anaty castings anao. Noho ireo geometry voajanahary, azo antoka ary tsy voafetra azo atao amin'ny fizotran'ny fampiasam-bola, ny fizotran'ny fampiasam-bola dia manome ireto tombony manaraka ireto:
Ny fampiasana casting casting dia mamokatra singa izay faritana tsara indrindra ho toy ny net-net-form, amin'ny teny hafa, singa izay mitaky fanodinana kely na tsy misy intsony. Ny fizotrany dia afaka mamokatra antsipiriany marina sy refy refresin'ny refy manodidina ny +/- 0,005 "isaky ny santimetatra amin'ny fandefasana hatramin'ny 80 kgs na grama vitsivitsy fotsiny ..
Amin'ny fizotrany hafa rehetra, ny fampitaovana dia singa iray manan-danja. Na izany aza, ny fitaovana fanariana fampiasam-bola dia novokarina avy tamin'ny firaka alimina vita amin'ny milina mora, saingy satria tsy mandray afa-tsy savoka izy io dia manana fiainana lava be. kailong Miara-miasa amin'ny mpanjifanay hanampy amin'ny filan'ny fitaovana ary miambina ny fanamboarana fitaovana rehetra ary ny fitahirizana ny fitaovana efa vita. Ny vidin'ireny fitaovana savoka ireny dia kely lavitra noho ny famonoana maty na famonoana maty, ary imbetsaka ny maty dia azo atao toy ny lavaka maro ary koa automatique semi na feno mba hampihenana ny vidin-tsolika, manome vokatra ambony tokoa amin'ny fampiasam-bolan'ny Fitaovana.
Firaka an-jatony maro samihafa no azo alefa amin'ny alàlan'ny fizotran'ny fanodinam-bola, amin'ny metaly fototra tena be mpampiasa toy ny vy, vy vy, varahina, nikela, vy, kobalta, sy maro hafa. Tombony lehibe iray matetika tsy raharahina dia satria azo hamaivanina na hofoanana ny famaranana ny milina farany, azo havaozina amin'ny metaly matanjaka kokoa ny fifangaroana alikaola, izay mazàna sarotra kokoa amin'ny masinina, ka miteraka fahombiazan'ny vokatra farany. kailong dia mandefa ny ankamaroan'ny metaly injeniera mahazatra ampiasain'ny indostria maro karazana, ary koa metaly manampahaizana manokana amin'ny fangatahana fampiharana.
Ny fampiharana mahazatra indrindra amin'ny famoahana vola dia amin'ny toe-javatra ahafahana mihena, na voafafa mihitsy aza, ny asa famaranana lafo vidy ho an'ireo singa vy misy. Izany dia vokatry ny maha-marina ny antsipiriany sy ny refy azo tratrarina amin'ny famoahana vola. Androany, mihabetsaka ny mpanamboatra mivadika hamolavola ireo singa vaovaony ho casting vola, satria ny faritra maromaro dia azo atao toy ny casting iray, mampihena ny fikirakirana, ny fametahana, ny fikajiana ary ny vidin'ny fanaraha-maso.
Ny famoahana vola dia nofinofin'ny mpamolavola. Ny endrika sarotra, na ivelany na anatiny dia azo atao amin'ny alàlan'ny fampiasana ny famolavolana fitaovana, ny coring savoka azo soloina, na ny coring seramika. Ny configurations anatiny izay tsy azo atao amin'ny ankamaroan'ny fizotran'ny famokarana hafa dia azon'ny Cheonseng omena amin'ny alàlan'ny fampiasana casting casting. Ety ivelany, ny rindrina tsy misy volavolan-dalàna, ny tsipika, ny lavaka, ny sefo, ny taratasy, ny serration ary na ny kofehy aza dia azo alefa mora foana ihany koa.
LEHILAHY METAL MINIMAL
Ny fampiasana castings amin'ny famatsiam-bola dia miteraka singa tsy mila milina kely, ary noho izany dia misy fihenan-danja amin'ny vy very amin'ny chips sy ny shavings. Tena ilaina izany indrindra rehefa miasa miaraka amin'ny fitaovana toy ny vy tsy vy, alika nickel, ary alika kobalta, izay tsy vitan'ny fandaniam-bola fa sarotra amin'ny milina.
Koa satria ny singa mpikirakira dia vokarina amin'ny alàlan'ny fampiasana lamina savoka avy amin'ny fitaovana tokana, dia mitovy ihany ny refesin'ny refy refesionaly avy amin'ny ampahany ka hatramin'ny ampahany, isan-taona. Rehefa takiana ny fanovana ny famolavolana dia matetika no azo atao ny manova fitaovana efa misy amin'ny vidiny kely.
Manomboka amin'ny famolavolana ka hatramin'ny famitana, ny famatsiam-bola dia matetika azo omena ao anatin'ny 4-6 herinandro.
Masinina singa, Impeller paompy, Impeller paompy vy, Impeller Pump Pump Centrifugal, Casting Impeller paompy, Tranom-paompy,